Koronaavaayiras: Weewrarri Covid-19 namoonni biiliyoona walakkaa akka hiyyooman taasisuu danda’a - BBC News Afaan Oromoo
Koronaavaayiras: Weewrarri Covid-19 namoonni biiliyoona walakkaa akka hiyyooman taasisuu danda’a
9 Ebla 2020
Weerarri koronaavaayirasii addunyaatti dhufe kun namoota walakkaa biiliyoonaa ta’an hiyyummaa keessatti akka galan taasisu danda’a.
Akeekkachifni kunis qorannoo Dhaabbatni Biyyoota Gamtoomanii weerarri kun diinagdee fi humna namaarratti fiduun qoratamee kan ifoomedha.
Kunis waggoota 30 keessatti hiyyuummaan guutuu addunyaatti yoo dabaluudha jedha gabaasichi.
Argannoon kunis walgahii torbee dhufu ministeerota Baankii Addunyaa, IMF fi G20 taasisuuf ta’an dursee ifa ta’e.
Qorannoon Dhaabbata Biyyoota Gamtoomani kunis ogeesota Kollejjii Kiingis Landanii fi Yuunivarsiitii Biyyaalessaa Awustiraaliyaadhaan (ANU) barreefame.
“Rakkinni diinagdeen fidu isa rakkinna fayyaa harka torbaan caaluu danda’a,” jedhe Kirostoofar Hooy ANU irraa.
Gabaasni guutuu addunyaatti lakkoofsi namootaa miiliyoonni 400-600 ta’an hiyyummaa keesssa galuu akka danda’an dabala jedha gareen UN kan bara 2030tti hiyyummaa balleessuuf irratti xiyyeefatee hojjatu.
“Argannoon keenna faayidaa safety net biyyoota guddataa jiran irratti saffisaan babal’isuun qabu akeeka - achiis oli – xiyyeeffannoo ol aanaa dhiibbaa COVID-19 biyyoota guddataa jiran irratti qabuu fi hawaasni addunyaa isa kana gargaaruuf waan godhuu qabu,” jedhen prof Andy Sumner Kollejjii Kiingis Landan irraa.
Yeroo weerarri kun dhaabatu guutuu addunyaatti namoonni biiliyoona 7.8 hiyyummaa keessatti kufu. Isa kana keessaas harka 40 kan ta’an hiyyeeyyii haaraa Eezhiyaa Bahaa fi Paasifik, tokko sadaffaa kan ta’an immoo biyyoota Sahaaraa gadii fi Eezhiyaa Kibbaati.
Jalqaba torbee kanaatti dhaabbileen addunyaa 100 liqiin biyyoonni guddatan fudhatan bara kana akka hin kaffalleef waamicha taasisaniiru. Kunis diinagdeesaanii gargaaruuf doolara biiliyoona 25 akka fayyadaman taasisa.
Koronaavaayiras: Indiyaatti COVID-19 to'achuuf nama manaa bahuu dhorkuun rakkoo biraa dhale
31 Bitooteessa 2020
Koronaavaayiras: Naayijeeriyaatti namni Koroonaavaayirasiin qabame inni jalqabaa argame
28 Guraandhala 2020